Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Aer Lingus ayaa dib u bilaabay Duulimaadyadii Dublin ee ka yimid Garoonka Budapest
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Hangari News • Irland News Breaking News • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Markab sidda calanka Irish ayaa soo dhoweynaya macaamiisha ku soo laabanaya duullimaadyada u dhexeeya Budapest iyo Dublin markii ugu horreysay tan iyo markii masiibada bilaabatay.
Aer Lingus ayaa dib u soo celisa isku xirka hawada Budapest-Dublin.
Aer Lingus wuxuu ku shaqayn doonaa adeeg saddex jeer toddobaadkii Arbacada, Jimcaha, iyo Axadaha.
Soo laabashada Aer Lingus ayaa kor u qaadi doonta suuqa Budapest ku dhawaad ​​2,500 kursi bishii.
Toddobaadkii hore ayaa la arkay Madaarka Budapest markhaati u noqo soo noqoshada lamaaneheeda mudada dheer soo jiray Kor Lingus. U adeegida albaabka Hungarianka tan iyo 2004, side calanka Irish wuxuu soo dhaweynayaa macaamiisha ku soo laabanaya duullimaadyada u dhexeeya Budapest iyo Dublin markii ugu horreysay tan iyo markii masiibada bilaabatay.
Aer Lingus wuxuu u adeegi doonaa adeeg saddex jeer toddobaadkii ah magaalada ugu weyn Ireland maalmaha Arbacada, Jimcaha, iyo Axadaha. Iyada oo adeegsanaysa maraakiibteeda A320s ee qaybta 1,912km, waxay diyaaraddu kor u qaadi doontaa suuqa Budapest ku dhawaad ​​2,500 kursi bishii.
Balázs Bogáts, Madaxa Horumarinta Duulimaadyada, Madaarka Budapest ayaa faallo ka bixinaya: “Shirkad kasta oo duulimaad ah oo ku soo noqota Tarmackeenna waa sabab loo dabbaaldego oo astaan ​​u ah dhaq -dhaqaaqeenna hore. Jadwalka Aer Lingus ee dib-u-bilaabista ee xiriirinta caasimadda Irish wuxuu ka dhigayaa dhammaadka usbuuca dhammaadka qumman ee meel caan ku ah dhaqankeeda iyo soo dhaweynta dabeecadda. ”
Peter O'Neill, COO, Aer Lingus wuxuu leeyahay: "Waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo talo bixinno duulimaadyada Budapest oo aan ku soo dhaweyno macaamiisha hadda saaran marka xayiraadaha safarka la dabciyey." O'Neill wuxuu raaciyay: “Waan ku faraxsanahay inaan mar kale awoodno inaan sameyno waxa aan ugu fiican nahay macaamiil badan - gaarsiinta safar caalami ah oo ammaan ah. ''